A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke Red Hat Enterprise Linux 8.1, mara akụkọ ya | Site na Linux
Uhie okpu ekwuputala ntọhapụ nke ụdị ọhụrụ nke gị Linux nkesa, «Red Hat Enterprise Linux 8.1«, Nke a ụdị nke mbụ kwadebere dị ka usoro mmepe ọhụụ nwere ike ịpụta, nke na-egosi nhazi nke nsụgharị kwa ọnwa isii ọ bụla na oge akara aka. Ezigbo ozi banyere mgbe a ga - ewepụta ụdị ọhụụ ga - enye gị ohere ịmekọrịta usoro mmepe maka ọrụ dị iche iche, kwadebe tupu maka mwepụta ọhụrụ, ma hazie oge maka itinye mmelite.
Ndụ ohuru nke ngwaahịa RHEL na-ekpuchi ọtụtụ ọkwa, gụnyere Fedora dị ka akwa mmiri maka mmejuputa atụmatụ ọhụrụ, CentOS Stream iji nweta nchịkọta ndị e guzobere maka ọbịbịa RHEL nke na-abịanụ (RHEL Rolling Release), Minimalist Universal Base Image (UBI, Universal Base Image)) maka ịgba ọsọ ngwa na arịa ndị dịpụrụ adịpụ, yana RHEL Developer Subscription maka n'efu iji RHEL na mmepe usoro.
Kedu ihe ọhụụ na Red Hat Enterprise Linux 8.1
Na mwepụta nke ụdị ọhụrụ a A na-enye nkwado zuru oke maka usoro Live-patching (kpatch) iji kpochapụ adịghị ike na Linux Kernel na-enweghị ịmaliteghachi usoro ahụ na ịkwụsị ọrụ ahụ. Na mbu, kpatch di na udi ihe omumu ihe omumu.
Gbakwunyere ụdị SELinux ọhụrụ: bolty_t, que ekwe boltd, a usoro maka ijikwa ngwaọrụ na a Thunderbolt 3 interface (boltd na-agba ọsọ ugbu a na akpa SELinux). Agbakwunyere klas iwu SELinux ọhụrụ: bpf, nke na-achịkwa nnweta na Berkeley Packet Filter (BPF) ma na-enyocha ngwa maka eBPF.
Ebumnuche ahụ gụnyere profaịlụ SELinux, lekwasịrị anya na iji igbe ndị dịpụrụ adịpụ na ikwe ka ndị ọzọ na-achịkwa ohere maka ọrụ ndị na-agba n'ime arịa iji kwado ụlọ ọrụ usoro.
Iji mepụta iwu SELinux maka akpa, ihe ọhụrụ Udic ịba uru, nke na-enye ohere, na-eburu n'uche njirimara ụfọdụ nke otu akpa, na-enye ohere maka naanị ihe ndị dị mkpa dị na mpụga dị ka ụlọ ahịa, ngwaọrụ, na netwọkụ. Ejirila ngwa ngwa SELinux (libsepol, libselinux, libsemanage, policycoreutils, checkpolicy, mcstrans) gaa na mbipute 2.9 na ngwugwu SETools na ụdị nke 4.2.2
Na kpochapụwo nnọkọ nke Gnome Omuma, a gbanwere mgbanwe desktọọpụ mebere. Ngwaọrụ ka ịgbanwee n'etiti desktọọpụ dị ugbu a n'akụkụ aka nri nke ogwe aka ya ma hazie ya dị ka warara na thumbnails desktọọpụ (iji gbanwee gaa na desktọọpụ ọzọ, pịa na thumbnail nke gosipụtara ọdịnaya ya).
Ọzọkwa Emelitere nsụgharị nke OpenSSH 8.0p1, Nara 2.12, chrony 3.5, samba 4.10.4. E tinyela modulu na alaka ọhụrụ PHP 7.3, Ruby 2.6, Node.js 12 na nginx 1.16 gaa na AppStream nchekwa (mmelite nke modulu na ngalaba ndị gara aga gara n'ihu). Nchịkọta agbakwunye na GCC 9, LLVM 8.0.1, Nchara 1.37 na Gaa 1.12.8 na nchịkọta software.
Ejirila 4.1.T sistemụ ihe eji arụ ọrụ usoro ihe ntanetị dị na ngalaba 3.15, yana emelitere ndagwurugwu Valgrind debugging toolkit ka ọ bụrụ ụdị nke XNUMX.
The dnf-utils ngwugwu e renamed ka yum-utils maka ndakọrịta (Ikike ịwụnye dnf-utils ka echekwara, mana ngwungwu a ga - anọchi ya na yum-utils).
Usoro DRM (Direct Rendering Manager) na ndị ọkwọ ụgbọ ala dị ala (amdgpu, nouveau, i915, mgag200) emelitere ha na steeti kwekọrọ na kernel Linux 5.1. Agbakwunyere nkwado maka AMD Raven 2, AMD Picasso, AMD Vega, Intel Amber Lake-Y, na Intel Comet Lake-U video subsystems.
Agbakwunyela mbipụta ọhụụ nke Red Hat Enterprise Linux System Roles, nke na-enye usoro nke modulu na ọrụ iji mejuputa sistemụ njikwa nhazi usoro dabere na Ansible ma hazie usoro iji jiri ọrụ akọwapụtara nke metụtara nchekwa, ikike ntanetị, mmekọrịta oge, iwu SElinux na iji kdump usoro.
Dịka ọmụmaatụ, atụmatụ nchekwa ọhụụ na-enye gị ohere ịrụ ọrụ dịka ijikwa FS na diski, na-arụ ọrụ na otu LVM, na nkewa ezi uche.
Ntinye na-ewuli akwadebe maka ihe owuwu ụlọ x86_64, s390x (IBM System z), ppc64le, na Aarch64, mana enwere maka nbudata naanị ndị ọrụ edebanyere aha na Portal Customer Portal.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịkpọ njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke Red Hat Enterprise Linux 8.1, mara akụkọ ya
Jairo Mgbe Prada Murcia dijo
esi melite concurrent njikọ na Linux Centos
Zaghachi Jairo Ever Prada Murcia
Weputara udiri ohuru nke ebe mmepe Qt 3D Studio 2.5